अनुदान ओइरो, प्रतिफल कति ?
कृषि क्षेत्रमा दातृ निकायको ३३ अर्ब अनुदान
काठमाडौं, १४ मंसिर : कृषि क्षेत्रमा विभिन्न वैदेशिक सहयोगहरु थुप्रै हुने गरेका छन् । हालसम्म विभिन्न दातृ निकायले ३ सय मिलियन अमेरिकन डलर अनुदान स्वरुप नेपलको कृषि क्षेत्रको विकासकालागि दिएका छन् । यसमा सवैभन्दा धेरै वल्र्ड बैंक र एडीबीले लगानी गरेको छ ।
तर, यसबारे रियल किसान पूर्ण रुपमा जानकार छैनन् । कृषि विकास मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुबारे जानकारी दिने हामीले प्रयास गरेका छौ । कुन दातृ निकायले के कस्ता कृषि कार्यक्रमको लागि कुन कुन जिल्लामा सहयोग गर्दैछन् ? यसबारे पूर्ण रुपमा जानकारी दिने प्रयास गरेका छौ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार नेपाल सरकारको जम्मा बजेटको त्यस्तै १५, २० प्रतिशत वैदेशिक सहयोग आउँछ । त्यसमा वैदेशिक अर्थात दातृ निकायले गरेको सहयोगबाट मात्रै के कस्तो उपलब्धी भयो भन्ने ठ्याक्कै तथ्याङ्क नभएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
यति धेरै अनुदान रकमको रिजल्ट भने पर्याप्त रुपमा देखिएको छैन । यसबारे चर्चाहरु थुप्रै हुने गरेका छन् । पारदर्शी रुपमा यस्ता रकम खर्च नहुदा सर्वसाधरण किसान भने जिल्ल पर्ने गरेका छन् ।
अहिलेसम्म सवैभन्दा धेरै व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) प्रोजेक्टकालागि वल्र्ड वैंकले ८१ दशमलब ८५ मिलियन अनुदान दिएको थियो । जुन सन् २००९ देखि सुरु भएर यही बर्ष अर्थात सन् २०१८ मा समापन भयो ।
त्यस्तै उच्च पहाड कृषि व्यावसाय तथा जिविकोपार्जन आयोजना (हिमाली) प्रोजेक्टकालागि एशियाली विकास वैंक (एडीबी)ले ३० मिलियन सहयोग गरेको छ । जुन उच्च पहाडी जिल्लाहरु जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ्ग, मनाङ्ग, सोलुखुम्बु, संखुवासभा, रसुवा र दोलखा रहेका छन् । त्यसबाहेक रानी, जमरा, कुलरिया सिंचाई आयोजनाकालागि वल्र्ड वैंकले कैलालीकालागि २ दशमलब ७ मिलियन, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाकालागि एडीबीले ३३ मिलियन सहयोग गरेको छ । जुन परियोजना मध्यपश्चिममा बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेत, दैलेख तथा सुदुरपश्चिमतर्फ कैलाली, डोटी, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चूला रहेका छन् ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत सहयोग गरेको विभिन्न परियोजनाको पूर्ण जानकारी तलको तालिकामा हेर्न सक्नुहुनेछ ।
समाप्त हुने मिति
कार्यक्रम लागु भएका जिल्ला
कूल लागत (युयस $)
व्यवसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (PACT)
७५ वटै जिल्ला ।
८१.८५ मिलियन (अतिरिक्त लगानी सहित)
एकिकृत जलश्रोत व्यवस्थापन आयोजना (IWRMP)
पूर्वाञ्चलः झापा, सुनसरी
मध्यमाञ्चलः वारा , पर्सा
पश्चिम,मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमका सवै जिल्लाहरु
जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना (PPCR)
पूर्वाञ्चल : झापा, मोरङ्ग, सुनसरी, धनकुटा, संङ्गखुवासभा, सप्तरी, सिराहा
मध्यमाञ्चल : वारा, महोत्तरी, काभ्रे, दोलखा, चितवन, धादिङ्ग
पश्चिमाञ्चल : मुस्ताङ्ग,कास्की, पाल्पा, रुपन्देही
मध्यपश्चिमाञ्चलः बाकें, दाङ्ग, सुर्खेत, रुकुम, जुम्ला
सुदुरपश्चिमः दार्चुला, डोटी, कैलाली
रानी, जमरा, कुलरिया
उच्च पहाड कृषि व्यावसाय तथा जिविकोपार्जन आयोजना (HIMALI)
जुम्ला, मुगु, हुम्ला, डोल्पा, मुस्ताङ्ग,मनाङ्ग, सोलुखुम्वु,संङ्गखुवासभा, रसुवा, दोलखा
साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना (RISMFP)
मध्यपश्चिम : बाकें, बर्दिया, दाङ्ग, सुर्खेत, दैलेख
सुदुरपश्चिमः कैलाली, डोटी, डडेलधुरा ,बैतडी, दार्चूला
समुदाय व्यवस्थित सिंचित (कृषि)
पूर्वाञ्चलको सुनसरी र मध्यमाञ्चलको भक्तपुर वाहेक सवै ३३ जिल्ला ।
उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजना (HVAP)
मध्यपश्चिम : सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पा
सुदुरपश्चिम : अछाम
किसानका लागि उन्नत वीउ विजन कार्यक्रम (KUBK)
पश्चिमाञ्चलः गुल्मी , अर्घाखाचीं
मध्यपश्चिमाञ्चलः रुकुम, रोल्पा, सल्यान , प्युठान
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना (AFSP)
मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमका तराईका ५ जिल्ला वाहेक अन्य १९ जिल्ला
घर वगैचा कार्यक्रम (Home Garden) Phase IV
रामेछाप, ओखलढुङ्गगा, खोटाङ्ग, सिन्धुली, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, दाङ्ग, रोल्पा, सल्यान, बर्दिया, कैलाली, वैतडी, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, दैलेख, जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला